Qalabka Ilaalinta Badbaadinta Soo -saaraha & Bixiyaha SPD
Warshadaha saliida iyo gaaska
Warshadaha kiimikada iyo dawooyinka
Nalalka LED-ka ee SPDs
Waxaan nahay aaladda Ilaalinta Cudurka Soosaaraha asalka ah leh astaan ​​u gaar ah oo waliba bixisa OEM iyo ODM adeegyada.
Waxaan ku sii haynaa khibrad iyo u heellan - si ay uga faa'iideystaan ​​macaamiisheenna, la-hawlgalayaashayada, iyo shaqaalaheenna.
Aaladda kor u qaadista aaladda (SPD) Ilaali Hantidaada
Haddii aad xiiseyneyso inaad wakiil noo ahaato suuqaaga, waxaan noqon doonnaa keyd xoog leh.
Waxaan ku siinaa taageero farsamo oo tayo sare leh koox farsamoyaqaanno ah. Caawinta waxaa lagu damaanad qaadayaa taleefan, E-mayl ama shir Whatsapp ah iyo weliba, shaqaalaheena farsamada waxay kormeer ku sameynayaan dhirta adduunka oo idil ee u baahan in la ilaaliyo iyadoo la siinayo ugu horreyn qiyaasta nidaamka SPD ka dibna tilmaamaha rakibidda iyo isku imaatinka ugu fiican. Kooxda injineerku waxay abaabulaan fadhiyo tababar ah oo loogu talagalay labada qaybood ee iibiyaasha iyo si toos ah macaamiisha.
Macaamiisha waxay ku kalsoonaan karaan taageero farsamo oo la isku halleyn karo oo dhan, sax ah iyo ixtiraam adag oo ku saabsan baahidooda. Shirkadeenu waxay qabataa cabirka iyo naqshadeynta nidaamyada, iyadoo kaashanaysa nashqadeeyayaasha iyo injineerada, gaar ahaan kuwa adag, waxayna siisaa taageero farsamo iyo ganacsi.
LSP waa shirkad horumarineed oo dhanka teknolojiyada ah, oo had iyo jeer raadisa waxtar iyo tayo ka sarreysa.
Kooxdayadu waxay ka kooban yihiin shaqaale aqoon iyo khibrad leh, waxaan isku dayeynaa inaan mar walba hal talaabo ka horreyno hal-abuurnimada.
Sidee LSP u daryeeli doontaa amarkaaga
1. Ka hel fikradda naqshadeynta koowaad ama sambal adiga
A. Waxaad noo soo dirtaa fikradahaaga naqshadeynta ama sawirkaaga CAD, waxaan kuu abuuri doonnaa sawirro CDR oo bilaash ah.
B. Waxaad ka iibsaneysaa CDR sawirro garaafyo ah shirkadda naqshadeynta oo noo soo dir, annagu waxaan qaabeyneynaa muunadda SPD sida ku cad sawiradaada CDR.
C. Noo soo dir shaybaarkaaga sheyga, waxaan abuurnaa naqshad la mid ah shaybaarkaaga amarada OEM.
D. Ka dooro kala duwanaanshaheena hadda jira, waxaan haynaa naqshado badan oo SPD ah - haddii aad jeceshahay nashqadeyntayada, ka xulo kaliya maktabaddayada ama nala soo xiriir si aad u hesho fikrado badan oo naqshadeynta ah.
2.100% Kormeer Qeyb kasta Golaha kadib
Waxaan tijaabin doonaa waxqabadka SPD kasta si aan u hubinno inay buuxiso shuruudahaaga.
3. waaxda iskuulka ee xirfadleyda
Isku soo wada duub dhammaan qaybaha iyo qalabka ka samaysan alaabada la dhammeeyey waxaa fuliya shaqaale xirfadlayaal ah kormeerayaal aqoon u leh ayaa ka mas'uul ah oggolaanshaha soo-saarka ugu dambeeya.
4.Professional on-line Kooxda QC
Marka loo eego shuruudaha wax soo saarka, dhammaan muuqaalka alaabooyinka iyo shaqadoodu waa inay dhaafaan 100% kormeerka khadka tooska ah ee QC-ga u qalma inta lagu gudajiro nidaamka shirkii.
5.Ku qanci Dhammaan Shuruudahaaga Baako
Ka dib kormeerka wax soo saarka, waxaan u xirxiraynaa alaabada si waafaqsan shuruudahaaga oo dhan. Midabka sanduuqa, fin laba jibbaaran ama sariirtaada. Waxaan sidoo kale kuu soo diri doonnaa sawirro faahfaahsan oo ku saabsan geeddi-socodka baakad kasta.
6.Safe iyo Markab Waqti
Diyaargarow kasta oo shixnad ah waxaa lagu fuliyaa kormeer dhow. Waxaan ku soo bandhigi doonnaa sawirro tallaabo kasta oo hawsha ka mid ah oo ay ku jiraan sawirrada weelka ammaanku ku jiro. Tilmaamo adag awgood iyo kormeer dhow markasta waxaan awoodnaa inaan ka takhalusno khaladaadka ku jira rarka alaabadaada.
7.Waxaad heli doontaa dhammaan sawirada iyo dukumintiyada xamuulka ah
Waxaan ku siineynaa dhamaan sawirada xamuulka, kooxdayada xamuulka ee khibrada leh ayaa kuu soo diri doonta dukumiintiyada oo dhan ka dib marka la dhammeeyo.
Waan dooranay LSP maxaa yeelay waxay ahaayeen kuwo aad loogu kalsoonaan karo maalintii koowaad. Waxay leeyihiin shaqaale xirfadlayaal ah oo si buuxda u tababaran oo naga caawiya inaan la soconno amarradeenna had iyo jeerna way ku faraxsan yihiin inay bixiyaan sawirro faahfaahsan oo ku saabsan shey kasta ama geeddi-soo-saar kasta - taas oo noo oggolaaneysa inaan la soconno marxalad kasta oo nidaamkayaga amar ah. Dhammaan alaabooyinka waxaa lagu keenayaa qiyaasta waqtiga lagu heshiiyey waa lagama maarmaan u ah ganacsigeenna.
Waxaan la arkaa wax ka qabasho LSP aad u qanacsan, oo leh nidaam amar toos ah oo toos ah iyo tiknoolajiyad aad u fiican oo loo isticmaalo soosaarida alaabada. Xaqiiqdii iyagu waa khabiir ku ah arimahooda iyo lamaanayaal adag oo ganacsigeena ah.
LSP ayaa soosaaraysay Aaladdayada Ilaalinta Badbaadinta ee 'SPD Surge ilaa' 2012. Waxsoosaar kasta wuxuu lahaa tayo aad ufiican wuxuuna kahelay jawaab celin togan macaamiisheena. Mahadsanid!
Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, taageerada macaamiisha-jawaab dhaqsaha leh ayaa halkan adiga kuu ah.
Cusbooneysiinta ugu dambeysa
Fiilooyinka Calaamadaha Calaamadaha Ilaalinta Kor u kaca
Calaamadaha fiilooyinka signalka aaladda ilaalinta kororka Dehn - Nidaamyada IT -da DIN Rail SPD [...]
Laba-cirif oo la qaadan karo Nooca 3 T3 qabqabteha qalliinka DR M 2P IL = 25A
Laba-cirif oo la qaadan karo Nooca 3 T3 qabqabteha DR M 2P IL = 25A DEHNil [...]
Badbaadinta kor u qaadista goobta unugga 5G (saldhigga saldhigga wareega)
Difaac xoog leh oo loogu talagalay goobta unugga 5G (saldhigga saldhigga moobiilka) Ilaalinta korantada Ka fogow [...]
Shirkadda Wenzhou Arrester Electric Co., Ltd.
Kudar: 5th FL, No. 666 Yaming Road, Xiangyang Industry Park, Liushi, Yueqing 325604 Zhejiang, PR China
Telefoonka gacanta: + 86-18905776650 (WhatsApp, Wechat)
Email: iibka [@] lsp-international.com
Right Xuquuqda daabacaadda 2010-2022 Wenzhou Arrester Electric Co., Ltd. Dhammaan xuquuq dhowran. | Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah | Shuruudaha iyo Xaaladaha |